Anyị na-etinye obi anyị mgbe niile ịme ihe, na okike, anyị na-eche na ọ ga-adị mma. Ma, ọ bụghị mgbe niile. Agbanyeghị na anyị etinyela mbọ anyị na ya, anyị ka nyocha. "Imehie bụ mmadụ." Anyị nwere ike ịmehie ihe, otu ụzọ iji chọpụta mmejọ ahụ na weebụsaịtị bụ site na nyochaa ya.
SEO bụkwa ihe anyị tinyere oge na mbọ anyị n’ime. Na Semalt , anyị na-ewetara gị ọrụ kacha mma SEO, mana anyị na-agbagha ụkwụ na nyocha. N'ụzọ nke a, anyị nwere ike ịhụ laps ga-ekwe omume ma gbanwee, na-ejide n'aka na ị ga-enyocha nyocha nke weebụsaịtị kachasị. Iji mee ka onyinye a zuru ezu, anyị nwekwara ike iwulite weebụsaịtị gị ma dozie njehie niile ọ gaara enwe.
Ọ bụrụhaala na ịnwe ngwaọrụ ziri ezi na nka, ị nwere ike ịme nyocha SEO onwe gị, mana ọ bụrụ na ịnweghị, ọ kachasị mma ị nweta enyemaka n'aka ndị ọkachamara dịka Semalt. A sị ka e kwuwe, ị gaghị achọ ka ọrụ ike gị niile gbadaa na mmiri site na nyocha SEO na-adịghị mma.
Nyochaa SEO gị na-ekpuchi ọtụtụ nhọrọ, ọ nwere ike ịbụ ọdịiche dị n'etiti mkpọsa SEO na-aga nke ọma na nke na-akụ afọ n'ala. Lee anya na SEO, dị ka ịnwa ime ka onye ahụ mara gị. Na mbido, ị dịka kpakpando nọ ebe dị anya na mbara igwe gbara ọchịchịrị, mana ị malitere ịnwale. Ma eleghị anya, atụmatụ mbụ gị anaghị arụ ọrụ, mana ị ga-abanye ọzọ wee nwalee ụzọ ọzọ ruo mgbe ị ghọrọ anyanwụ n'anya onye ahụ. Nke ahụ bụ ihe weebụsaịtị ọ bụla chọrọ, nyocha SEO bụ ngwá ọrụ iji hụ ma usoro mbụ gị rụọ ọrụ. Na-enweghị nyocha a, ị gaghị achọpụta na ụzọ gị anaghị akwụ ụgwọ n'agbanyeghị na ọ nweghị njọ.
Mana nke ahụ ọ bụ nyocha SEO niile gbasara?
Onwere ike ị nụrụ n ’ụwa azụmahịa nke metụtara ndụ n’onwe ya. Ọ na-aga dị ka nke a “ọ bụrụ na ịnweghị ike ịlele ya, ị nweghị ike imeziwanye ya” ka ọ bụrụ nke kachasị mma, ịkwesịrị ịma ụdị ịdị mma gị ma ọ bụrụ na ọ bụghị, kedu ka ị kachasị mma?
Inwe ike tụọ etu SEO gị si eme nke ọma dị oke mkpa n’inweta ebe nrụọrụ weebụ gị na peeji nke mbụ, yana-ọkwá dị elu. Dị ka kaadị akụkọ, ọ na-akọwapụta ike gị na adịghị ike gị ka ị nwee ike imeziwanye. Ọ dabara nke ọma maka azụmaahịa, ị nwere ike ịlele otu esi eme ka njikarịcha SEO gị dị mma nwere ngwá ọrụ akpọrọ Google Analytics.
Agbanyeghị na anyị na-akwado gị ka ị jiri Semalt, ị nwere ike ime nke a n'onwe gị, nyere na ị maara ihe ị ga-atụ, otu esi eji ngwaọrụ, yana otu esi etinye mmezigharị gị na weebụsaịtị gị. Ọ bụrụ na ịgaghị, jiri obiọma kpọtụrụ ndị ahịa Semalt ma ọ bụ otu ndị edemede anyị dị ịtụnanya ebe a. Anyị nwere ike nyochaa nsonaazụ gị ma rụọ mmezigharị ya, nke na-etinye gị n'ọnọdụ kachasị elu ebe ịnọ.
Mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịgụta ihe ịme nyocha SEO pụtara, ị nọ ebe kwesịrị ekwesị.
Ọ bụrụ n’uche ime nyocha nyocha arụmọrụ onwe gị, nke a bụ ihe ị ga - elebara anya:
Ọtụtụ oge, ihe ọmụma bụ ike n'ezie. Enweghị ihe omuma iji tụta ihe dị mkpa, ị ga - abịa naanị ọtụtụ nsonazụ na - adịchaghị mkpa. Ikwesiri ighota nke a tupu ima abanye na mpaghara oru nyocha SEO.
N'oge ma ọ bụ mgbe emechara nyocha SEO, ọ bụ ihe a na-ahụkarị maka ndị ọhụụ na ndị ọkachamara nwere oge ka oge ụfọdụ ga - enweta ihe efu nke igwe okike ya. Often ga - achọta onwe gị mgbe niile site na nganga ma mezuo etu i si ele peeji gị anya. Agbanyeghị, ị kwụsịghị ịtụle ịdị mma nke echiche peeji ndị ahụ. Kama, ị ga-agarị karịa ihe ịpịrị pịa.
Otu ihe dị mkpa nke ọ ga-abara gị uru ị ga-elebanye anya bụ ọnụego bounce. Nke a na-egosi ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ na-enweta ihe ha nwetara site na nanị otu peeji wee gaa n'ihu. N’aka ozo, o na - egosiputa ndi n’enwe afọ ojuju n’enweghi ihe ndi ozo na saiti gi. N'adịghị ka ihe ị nwere ike ịdị na-eche, ole na ole ọnụọgụ nke ọnụego ka mma. Anyị niile enyochaala maka ozi dị mkpa, ma anyị pịa njikọ, anyị ga-agụ ọtụtụ peeji tupu anyị enweta ozi anyị chọrọ. Nke ahụ abụghị jụụ, ma ọtụtụ oge, ị ga-atụfu onye ọrụ. Mgbe ị na-atụle ọnụego bounce gị, ihe ọ bụla dị n'etiti 26% na 40% dị oke mma, a na-ewerekwa ihe ọ bụla karịrị 70% dị njọ, yana ị nwere ike ịchọ ọrụ na nke ahụ.
Ibelata ma ọ bụ n ’ala azụ dị mkpa n’ihi na ọ na - egosi gị na ndị na - agụ akwụkwọ gị nwere mmasị n’ihe ị ga - ekwu, na ị na - ekwenye zuru ezu.
Nlele peeji nke Organic
Nlele maka nlele peeji nke ndu gi bu kwa uzo ozo di nkpa inyocha oru SEO gi. Ọnụ ọgụgụ dị elu nke echiche peeji pụtara na SEO gị na-eme nke ọma, ọ na - ewetakwa ndị ọrụ karịa na ebe nrụọrụ weebụ gị. Onu ogugu nke nlele peeji dị, n'aka nke ọzọ, na-egosi na weebụsaịtị gị anaghị egosipụta mgbe a na-achọ isi okwu metụtara, ma ọ bụ na ebe nrụọrụ weebụ gị adịghị mma iji mee ka ndị na-ekiri pịa.
Ọtụtụ oge, ihe ndị a bụ ihe ndị a na-eleghara anya site na ndị ọrụ nyocha SEO kachasị ọhụrụ
Etu esi nyochaa nyocha oru SEO nke weebụsaịtị
Nyocha site na iji ihe nyocha SEO
Nke a bụ otu n’ime ihe ndị ahụ ị nweghị ike ịme n’enweghị enyemaka. I nweghi ike igu akwukwo site na webusaiti gi wee bia n’iru ezi ihe banyere otu SEO si aru oru nke oma. Iji mee nke ahụ, ịchọrọ ngwaọrụ.
Enwere ọtụtụ ngwaọrụ na ịntanetị ị nwere ike iji nyochaa SEO gị. Ọ bụrụ na ịchọrọ itinye ike gị na ihe ọzọ, ị nwere ike ekenye ọrụ a na Semalt. Anyị ga-enyocha arụmọrụ SEO gị n'oge ọ bụla na-enweghị iwere oge gị. Anyị ga-emekwa mgbazi ọ bụla iji hụ na ebe nrụọrụ weebụ gị dị na elu, ebe ọ dị.
Otu n'ime ihe ndị kachasị ewu ewu bụ ngwá ọrụ nyocha SEO bụ Google Analytics. Na mgbakwunye na eziokwu sitere na Google, nke mara oke mma, ọ bụ n'efu.
Mgbe ị na-atụle SEO gị, ihe mbụ ị na-eme bụ ịlaghachi azụ iji lelee arụmọrụ SEO gị niile. Site n’ịmụta mgbanwe na ngụkọta nje dị n’ọrụ n’oge, ị nwere ike igosi ma atụmatụ SEO gị ọ na-arụ ọrụ.
Nyochaa usoro ndu gị
Nke a bụ ụzọ kachasị pụta ìhè iji hụ ma ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ gị SEO na-eme nke ọma bụ site na ịhụ ọnụọgụ nke ịpị ị na-enweta. Nyochaa a na-arụ ọrụ maka ma ọnụnọ weebụsaịtị na akwụ ụgwọ weebụsaịtị. Ọ bụrụ na ị na-eji Google Analytics, ị nwere ike ịlele okporo ụzọ gị site na ịga ịnweta mgbe niile okporo ụzọ yana ọwa. Ọ bụrụ n’ịgbaso usoro ndị a, ị ga - enwe ike ịhụ ka okporo ụzọ gị si arụ ọrụ nke ọma. Ga-enwekwa ike ịhụ etu okporo ụzọ okporo ụzọ gị si arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụrụ na atụnyere ma ọ bụ njikọ sitere na mgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozi.
Ọ pụtara na SEO gị anaghị eme nke ọma maka ube ma ọ bụ na-ada n'okporo ụzọ na-eto, na ị ga-emezi ọdịnaya weebụsaịtị gị na atụmatụ nke SO.
Nyochaa njikọ azụ gị
Site na mmụba na-abawanye na ebe nrụọrụ weebụ gị, ị kwesịrị ịmalite ịchọpụta mmụba na ọnụọgụ nke njikọ njikọ weebụsaịtị gị. Agbanyeghị, ọ ga - akachasị mma ma ọ bụrụ na ihe ndị a ejughị gị ike n'ihi na ogo azụmazụ ndị a dịkwa mkpa. Lee ikike ngalaba nke weebụsaịtị ahụ na-enye backlinks ndị a na weebụsaịtị gị. Site na nyochaa ọdịnaya e tinyere weblinks ndị a, ị nwere ihe mmadụ chere maka weebụsaịtị gị. Mgbe ị ghọtara ihe ndị a, ị nwere ike gbanwee echiche a ma ọ bụ were ya.
Nyochaa SEO gị site na isi okwu ya
Kama inyocha SEO nke weebụsaịtị gị site na nhazi ya niile yana ọnụọgụ nke ọpịpịa ọ na-enweta, ị nwere ike nyochaa ya site na ọnụọgụ na ogo nke isiokwu ejiri ya. Nke ahụ kwuru, Google Analytics anaghị arụ nnukwu ọrụ na-egosi data isiokwu, yabụ ị nwere ike chọọ ịnweta ngwaọrụ nyocha SEO ọzọ.
Mgbe ị nyochara weebụsaịtị gị wee nweta nsonaazụ na-adịghị gị mma, ihe mbụ ị na-eme bụ ịchọpụta nsogbu ahụ. Ọtụtụ oge, ọ bụ otu n'ime ha abụọ.
Ma ọ bụ ọdịnaya
Ebe ọ bụ na isi okwu dara n'okpuru ọdịnaya, ha na-ekpebi etu weebụsaịtị gị si gosi Google ma ọ bụ ndị ọbịa ihe kpatara achọrọ weebụsaịtị gị. Mana imata ka isi okwu gi di nma, igha eme nyocha. Nke a na - egosi gị ma ọ bụrụ na ịchọpụtaghị mkpụrụ okwu gị, ma ọ bụrụ na ha ezughị ma ọ bụ ọ bụrụ na ha erughi ndị na - ege gị ntị. N'ụzọ a, ịnwere ike ịrụ ọrụ na ọdịnaya gị otu a wee nweta ntinye ndị ahụ.
Ingchọta saịtị gị gbajiri agbaji
Peeji ndị gbajiri agbaji bụ otu ụzọ dị mma iji funahụ ndị ọbịa na saịtị gị. Mgbe ndị ọbịa na-enweghị ike ịnweta peeji nke nwere ozi ha na-achọ, ha na-efunahụ enweghị mmasị na weebụsaịtị gị niile. Nke a pụtara mbelata okporo ụzọ na ndị ahịa nwere ike isi. Idozi mmejọ peeji ndị mebiri emebi dị ezigbo mkpa, na weebụsaịtị karịrị 100 0r 200 peeji, ọ na - esiri nnukwu ike. Nke a bụ ihe mere ịchọrọ iji nyochaa ebe nrụọrụ weebụ gị ka ịchọta ha.
Nyochaa ọsọ saịtị gị
Speedgba saịtị bụ otu isi ihe ị ga - eji nyochaa ma ọ bụ lelee anya mgbe ị na - agụ nyocha weebụ gị. Google na-akwado weebụsaịtị ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ibido ma ọ bụ gosipụta na peeji nke mbụ, weebụsaịtị gị ga-enwerịrị ngwa ngwa. Iji ihe nyocha dị ka nyocha ngwa ngwa ga-agwa gị oge ole ọdịnaya weebụ gị na-ewe. Imeziwanye mkpokọta weebụsaịtị gị na-eme ka ahụmịhe onye ọrụ gị dịkwuo mma ma mee ka ndị ọrụ nwekwuo ka ị nọrọ na saịtị gị. Mana webụsaịtị ga-ewe iwe ga - akpasu ndị ọbịa gị iwe ma mee ka ha pụọ tupu ọdịnaya gị egosiputa na enyo ha.